ချင်းတောင်တန်း: ချင်းတောင်တန်းက အသည်းပုံ ရိရေကန် အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း
ချင်းလေး၏ ဥယျာဉ်လေး မှ အားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်။
ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အလွမ်းစာမျက်နှာလေး မှလာရောက် အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင် ပါသည်။
Burma VJ (1)
Chin Music Videos (4)
JOHN RAMBO..ဂျွန်ရမ်ဘိုမြန်မာဇာတ်ကြမ်း (1)
Lwinmoe travelling(လွင်မိုးခရီးသွားနေသည်) (1)
Myanmar Music Mp3 (8)
Myanmar Music Videos (7)
ချင်းမဂ္ဂဇင်း ကောက်နှုတ်ချက်များ (6)
မြန်မာ စကားပုံ (1)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရရှိတဲ့ နိုဗယ်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား (1)
ဒေါက်တာ ဆလိုင်းထွန်းသန်း (1)
အောင်ဆန်းသူရိယ ဗိုလ်တိုက်ချွန်း - တက္ကသိုလ်တင်စိန် (1)
စီယံ ရဲ့ သီချင်းတွေ
Mother,How are you?(မေမေ)
ချင်းတောင်တန်း မှ ချင်းသီချင်း
Salai Tuan Ling Thang
Salai Tun Kham...Zogam
Salai sun ceu၏ သီချင်းစုစည်းသည်
ဆလိုင်းဆွန်ကျဲအိုရဲ့သီချင်း ရှိပါက ပေးပို့လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ဝေနှင်းပွင့်သုန်...Waihnin Pwint Thon
ချင်းတောင်တန်းက အသည်းပုံ ရိရေကန် အကြောင်းတစ်စေ့တစ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရရှိတဲ့ နိုဗယ် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအန...
2012,end of the world?
Bruce Lee Life
ချင်းတောင်တန်းက အသည်းပုံ ရိရေကန် အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း
ချင်းတောင်ပေါ်မှ အသည်းပုံသဏ္ဍန် နတ်ရေကန်
မြန်မာနိုင်ငံက စေတီပုထိုးများ ၊ သယံဇာတများနှင့် အံ့မခန်း အောင်လှပ လွန်းသည့် သဘာဝ သယံဇာတ များကြောင့် လူသိများ ထင်ရှားသည့် နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုမျှ သဘာဝ အလှများ နှင့် ရှုခင်းများကို လူသိ များသည့်တိုင် လူသူ အရောက်အပေါက် နည်းပါး မှုကြောင့် လူသိ နည်းနေ သေးသော သဘာဝ အလှများစွာ ကျန်ရှိနေပေသေးသည်။ ထိုအထဲ တွင် အမြင့်ပေ (၁၉၆၆)ပေရှိသော ချင်းတောင်တန်း ကြီးများပေါ်မှ အသည်းပုံ တိတိကျကျ ပေါ်လွင်နေသော ရေကန်ကြီး တစ်ခု သည်လည်း အပါအ၀င်ပင် ဖြစ်ပေသည်။ ထိုရေကန် ကြီးသည်ကား ချင်းလူမျိုး တို့အတွက် ဒဏ္ဍာရီ ဆန်သော ရာဇ၀င်များ၊ ယုံကြည် စွဲလမ်းမှုများ၊ အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားမှုများဖြင့် ပြည့်နှက် နေသော ရိဒ်ရေကန်ကြီး (Reh-Lake) ပင်ဖြစ်ပေသည်။
ရိဒ် ရေကန်ကြီး၏ တည်နေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက် မြောက်ဖက် ဒေသ ၊ ချင်းပြည်နယ်၏ အနောက်မြောက်ဖက် အစွန်းတွင် တည်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယ - မြန်မာ နယ်စပ် နှင့်ပို၍ နီးသည်။ နယ်စပ် မျဉ်းနှင် ၂ မိုင်သာဝေးသည်။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံဘက် ကြံဖိုင်းမြို့ နှင့် မိုင် (၂၀) ဝေးပြီး မီဇိုရမ် ပြည်နယ်ရှိ မြို့တော် အိုက်ဇောနှင့်လည်း မိုင်(၁၃၀) သာဝေးသည်။ သို့အတွက် ရိဒ်ရေကန်ကြီးသို့ လာရောက် လည်ပတ် သူများမှာလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘက်မှသာ များသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံဘက်မှ သွားရောက် သူတွေများ အနေဖြင့်တော့ ချင်းတောင်၏ တံခါးဝဟု ဆိုစမှတ်ပြုသည့် ကလေးမြို့မှ တစ်ဆင့်သာ ခရီးဆက်ကြရသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့မှ မိုင် (၄၀)ဝေးသည်။ ကလေးမြို့မှ မိုင် (၆၀) နီးပါးဝေးသော ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့ကို ဖြတ်ကာ တီးတိန်မှ (၃၂) မိုင်ဆက် သွားကြရသည်။ သို့ရာတွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံဘက်မှ လာသည် ဖြစ်စေ ၊ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ သွားသည်ဖြစ်စေ၊ သေချာသည် တစ်ခုကတော့ အမြင့်ပေ လေး၊ ငါးခြောက်ထောင် ကျော်ရှိသော တောင်တန်းများပေါ်မှ ကျော်ဖြတ်၍ သွားကြရခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အမြင့်ပေ လေး ၊ငါး ခြောက်ထောင် တောင်တန်းကြီးများကို ဖြတ်သန်း သွားရသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ အပန်းဖြေ လေ့လာသူတွေ ရှိသလို နိုင်ငံခြားသား အချို့လည်း လာရောက် လေ့ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် အများဆုံး အလာများသည် ကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ ဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့အနေဖြင့် ထိုသို့ အလားများရသည်ကတော့ "၄င်းတို့၏ ဆွေမျိုး သားချင်းများ၏ ၀ိညာဉ်များသည်လည်း ရိဒ်ရေကန်ကြီးတွင် လာရောက်မှီခိုနေထိုင်ကြသည်" ဟူသော အယူအဆ တစ်ရပ် အရ အထွတ်အမြတ်ထားရာ နေရာအဖြစ်လာရောက် ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ယခုအခါတွင်တော့ ရိဒ်ရေကန်ကြီးအတွင်း အပျော်စီးလှေများ စီးနင်းနိုင်အောင် စီစဉ် ပေးထားခြင်းနှင့် ညအိပ် တန်းခိုနိုင် ရန်ပင် ဘန်ဂလိုများ စီစဉ်ပေးထား ခြင်းတို့ကြောင့် ရိဒ်ရေကန်ကြီးမှာ အပျော်စီး လှေလာရောက် စီးနင်းသည့် တောင်ပေါ် သားများနှင့် ပျားရည်ဆန်း ခရီးထွက်သူများ ဖြင့်ပါ စည်ကားနေ လေ့ရှိပေသည်။
ထိုမျှ ဒဏ္ဍာရီဆန်သော အတိတ်သမိုင်းများ ၊ ဆန်းပြားသော ယုံကြည်ချက် များနှင့် ထူးခြားချက်များနှင့် ပြည့်နှက်နေသော ရိဒ်ရေကန်ကြီးမှာ ပတ်လည် အကျယ် ၂.၅ မိုင်ရှိသော တောင်ပေါ် ရေကန်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုပတ်လည် အနား တစ်လျှောက် တွင်လည်း မိုးမခပင်များက ခြံစည်းရိုး ရှည်ကြီးသဖွယ် သဘာဝ အလျောက် စီတန်းကာ ပေါက်ရောက် နေပြန်ရာ အဆိုပါ မိုးမခ ပင်တန်းကြီးကို ချင်းလူမျိုးတို့က ( ၄င်းတို့၏ ယုံကြည် ချက်အရ ၀ိညာဉ် ခြံစည်း ရိုးဟု ကင်ပွန်း တတ်ထားကြ လေသည်။) ကန်အတွင်း ရေပြင်၏ ပျှမ်းမျှ အနက်မှာပေ (၅၀) ရှိပြီးအနက်ဆုံး နေရာများ တွင်မူ ပေ (၆၀) အထိ ရှိသည်။ ရေအရောင်မှာ ပြာလဲ့လဲ့ရှိပြီး ကန်အတွင်းတွင် ကြာဖြူ ၊ ကြာနီ နှင့် ဗေဒါများ ဖူးပွင့်နေလေ့ရှိသည်။ အလားတူပင် ရေကန်ပတ်လည်ရှိ မိုးမခပင်များ ထက်တွင် လည်း သစ်ခွပင်များ ပေါက် ရောက်နေပြန်ရာ ရိဒ်ရေကန်ကြီးမှာ တောင်ပေါ်ဒေသမှ စာပန်းချီခြယ်သ မကုန်နိုင်သည့် ရှုခင်းကြီး တစ်ခု သဖွယ် ဖြစ်နေ ပါတော့သည်။
ရိဒ်ရေကန်ကြီး၏ ဖြစ်တည်မှု သမိုင်းကား အလွန်ပင် ဒဏ္ဍာရီဆန်လှသည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့ ဒဏ္ဍာရီ ဆန်လွန်းလှသည့်တိုင် အဆိုပါ ဖြစ်တည်မှု သမိုင်းကို တော့ ချင်းလူမျိုးတို့က ယနေ့တိုင် အခိုင်အမာ ယုံကြည်နေ ကြဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဖြစ်တည်မှု ဒဏ္ဍာရီကြီး၏ အစကား လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ငါးရာကျော် ၊ ခြောက်ရာ နီးပါး ကာလ၊ မီဇို ချင်းလူမျိုးတို့၏ အခြေချ နေထိုင် ခဲ့သည့် အချိန်မှ ပင်ဖြစ်ပေသည်။ ချင်းအနွယ်ဝင် မီဇိုလူမျိုးနှင့် ဟွာလ်ငိုး (Huanlngo) နွယ်ဝင် တို့သည် ၁၄၅၀ ခုနှစ်ခန့် မှစတင်၍ ချင်းတောင်တန်း ပေါ်တွင် မြို့ပြ တည်ထောင်ကာ အခြေချ နေထိုင် ခဲ့ကြသည်။ ဤ သို့နေထိုင် လာခဲ့ရာမှ တစ်နေ့သော အခါတွင်မူ ဒုတိယမြောက် ဆွေးပွီးမြို့သူကြီး ဟွာထန် (Huathana) သည် အိပ်မက်တစ်ခုအား မြင်မက်လေတော့သည်။ ယင်း အိပ်မက်တွင် မုတ်ဆိတ်မွေး ဖားဖားနှင့် အလွန်တရာမှပင် ကျက် သရေ ရှိလှသော နတ်မင်းကြီး တစ်ပါးက ဟွာလ်ထန်အား ကိုယ်ရောင်ပြပြီး " ငါသည် ၀ိညာဉ်စောင့်နတ်မင်းကြီး ပူးရိဒ် ဖြစ်ပေသည်။ သင်တို့၏ ၀ိညာဉ်များ အားစောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာ ငါသည် နွားနောက်ဖြူ အသွင်ဖန်ဆင်းကာ ကောင်းကင် ခရီး ဖြင့်လာခဲ့ရာ သင်တို့၏ သင်တို့အရပ်၏ အနောက် မြောက်ဖက်ခရီး အတန်ငယ်ဝေးသော နေရာတွင် နေရာတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပေသည်။ ငါသည် ထိုနေရာ၌ စံစားနေထိုင်ရန် အလို့ငှာ ထိုနေရာအား လူတို့၏ အသည်းနှလုံးပုံ တိတိကျကျ ရှိသော ရေအိုင်ကြီးတစ်ခု အဖြစ်ဖန်ဆင်းလိုက်ပေသည်။ ထိုရေအိုင်ကြီး တွင်ယနေ့မှ စ၍ ငါကိုယ်တော်စံစားမည် ဖြစ်သလို .. သေသောသူအားလုံးတို့၏ ၀ိညာဉ်များသည်လည်း မဖြစ်မနေ ငါထံသို့ လာကြရပေမည် " ပြောဆိုမိန့်ကြားသွားခဲ့လေသည်။ ထိုအိပ်မက်အရ ဟွာလ်ထန်သည် သူ၏ မူးမတ်များအား လွှတ်၍ ရေအိုင်ကြီးကို ရှာဖွေစေခဲ့ရာ ခုနှစ်ရက်တိတိ ပြည့်မြောက်သော နေ့မှာပင် ထိုရေအိုင်ကြီးအား တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ယင်းသို့တွေ့ရှိချိန်မှ အစပြု၍ ထိုရေကန်ကြီးအား ရိဒ်ရေကန် (RHI-DIL) ဟုခေါ်ဆို ကြလေသည်။ ရိဒ်ဆိုသည်မှာ ရိဒ်နတ်မင်းကြီးအား ကိုယ်စားပြုပြီး (DIL) မှာရေကန်ဟု အဓိပ္ပါယ် ရလေသည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ ရိဒ်နတ်မင်းစံစားရာ ရေအိုင်ပင်ဖြစ်လေသည်။
ရိဒ်ရေကန်ကြီးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မီးဇိုချင်းများက လူတစ်ယောက် သေဆုံးသွားသည့် အခါတွင် ထိုသေဆုံးသူ၏ ၀ိညာဉ်သည် ဘ၀တစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်း နိုင်ရန် နောက်ဆံတင်းစွာဖြင့် ရိဒ်ရေကန် သို့လာကြရပြီး ရေကန်သို့ ရောက်သောအခါမှ လုံးလိုသွေး (Longlotui) ခေါ် အတိတ်ဘ၀ မေ့စေနိုင်သည့် စမ်းရေကြည်ကို သောက်ကာ ဟိုလ်လိုပါးရ် (Hoilopar) ခေါ် နောက်မလှည့်ပန်း ကို ပန်ဆင်ကြရသည်။ ထိုအခါ တွင်မှသေသူ၏ ၀ိညာဉ်များမှာ အတိတ်ဘ၀အား တမ်းတစိတ် များပျောက်ကွယ်ကာ ဘ၀သစ်သို့ ကူးပြောင်း သွားနိုင်ရန် အတွက် ရေကန်ကြီး အတွင်းသို့ စိတ်ဖြောင့် လက်ဖြောင့် ဆင်းသွားနိုင်ကြသည်ဟု ယုံကြည်ထားကြည် ထားကြသည်။ အဆိုပါယုံကြည်မှု အရလည်း ချင်းလူမျိုး တို့မှာ ပွင့်လင်းရာသီရောက်တိုင်း ရိဒ်ရေကန်ကြီးသို့ လာရောက် လည်ပတ်ကာ ရက်လည် ၊ နှစ်လည်ပွဲကဲ့သို့သော နာရေးပွဲများကို ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ယင်းပွဲများတွင် ဘုန်းတော်ကြီးများက ရေကန်တွင်းမှကို လက်ခုပ်နှင့် ခပ်ကာ သရဇ္ဇယ် ကြလေ့ရှိပြီး ကန်အတွင်းသို့ ငွေအကြွေစများ နှင့်အမွှေးနံ့သာများ ပက်ကြဲကာ ရေကန်အနီးရှိ အရိပ်ကောင်းသော ညောင်ပင်ကြီးအောက်တွင် တရားပေးလေ့ရှိကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ကမ္ဘာအ၀ှမ်းတွင် ရှိရှိသမျှသော ရေကန်များအနက် အသည်းပုံစစ်စစ် ရှိသည့် တစ်ခုတည်းသော ရေကန်ဖြစ်သည်။ အမြင့်ပေ (၁၉၀၀) ကျော်သော တောင်တန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည့် ရေကန်လည်းဖြစ်သည်။ ထိုအချက်များထက် ပို၍ထူးခြားသည်မှာ ချင်းပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဖြစ်သော ဟားခါးတွင် အပူချိန် (ရေခဲမှတ်အောက်) အနှုတ် (၃) ဒီဂရီရောက်နေချိန်၌ ရိဒ်ရေကန်ကြီးအတွင်း ထူးခြားစွာ အနွေးဓါတ်ရရှိနေခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။ ထိုမှ တဖြန် အထူးခြားဆုံးဟု ဆိုရမည့်အချက်ကား ရိဒ်ရေကန်ကြီးအတွင်းသို့ ချောင်းရေ ၊ မြောင်းရေ လည်း စီးမ၀င် ၊ မိုးလည်းမရွာသည့် ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်း နှင့် ဇန်န၀ါရီ လဆန်းကဲ့သို့ ဆောင်းနှင်းထန်သည့် ကာလများတွင် ကန်ရေ ပြင်မှာ အလိုအလျောက် နောက်ကျိနေတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ရေးသားသူ = ချမ်းညိမ်း
http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title မှ သန်းပေါင်းများစွာ ရှိသောဆိုဒ်တွေ ထဲက ကျွန်တော်တွေ့သမျှ ဖတ်မိသမျှလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ချင်းလေး at 12:02 PM
ကမ္ဘာ့ နာရီစင် ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ နိုင်ငံကို ကလိပါ။ <!-my calendar widget - html code - mycalendar.org -->
English to MM,MM to English Dictionary
English to Norwegian စကားပြန်
Norsk to English စကားပြန်
Norwegian to Myanmar Dictionary
ဒီOrdbokစီစဉ် လုပ်ဆောင်သူကို အထူးအထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
<!-end of code--> Myanmar <!-local time clock widget - html code - localtimes.info -->
BINGO ONLINE football Online casino Casinoswiss SPIELAUTOMATEN
ဖတ်စရာ မှတ်စရာ ကြည့်စရာများ
Christmas tree for desktop(10.28MB)
လာလည်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောင်လည်း လာလည်ပါဦးနော်။
ချင်းတောင်တန်း © 2008 Template by: